China Diesel Injini Shaft nkqo Turbine Fire Pump mveliso kunye nabenzi | IsiTongke
Umzekelo No .: XBC-VTP
Iimpompo zokulwa umlilo shaft XBC-VTP ethe nkqo ziluthotho lwenqanaba elinye, iimpompo ze-multistage diffusers, ezenziwe ngokuhambelana neNqanaba lesiZwe le-GB6245-2006. Sikwaphucule uyilo ngokubhekisa kumgangatho woMbutho woKhuseleko loMlilo eMelika. Isetyenziselwa ukubonelelwa ngamanzi emlilweni kwi-petrochemical, igesi yendalo, isityalo samandla, i-cotton textile, i-wharf, i-aviation, indawo yokugcina impahla, isakhiwo esiphakamileyo kunye namanye amashishini. Inokusebenza nakwinqanawa, itanki yolwandle, inqanawa yomlilo kunye nezinye iimeko zonikezelo.
Impompo, umqhubi kunye nesilawuli zibekwe kwisiseko esinye.
Iyunithi yesiqhelo yeplate esisiseko isusa isidingo sendawo eyahlukileyo yokunyuka.
Icandelo eliqhelekileyo liyanciphisa isidingo sokudibanisa iingcingo kunye nokudibana.
Izixhobo zifika zithunyelwe ngokudibeneyo, zivumela-ukufakwa ngokukhawuleza nangokulula kunye nokuphathwa.
Inkqubo eyenzelwe ngokwezifiso, kubandakanya izinto zokusebenza, izixhobo, kunye nokubekwa okukhoyo ukuhlangabezana neenkcukacha zomthengi.
♦ Ukuqinisekisa uyilo
I-TKFLO nkqo I-Turbine Fire Pump Aeziluncedo:
♦ Ngoyilo lwe-hydraulic oluphambili kunye nolwakhiwo, ukwamkela inkqubo ye-Ashland yokwenza i-blower yokuhambisa, ukwamkelwa kwenkqubo yokuthambisa epoxy kwi-vane ye-impeller, kunye nokukhethwa kwezinto ezifanelekileyo, kwenza ukuba impompo isebenze ngokugqibeleleyo kunye nobomi obude.
Isixhobo esine-whirl sand kunye nesakhiwo esifana ne-maze senza ukuba isanti ingakwazi ukungena kwiibhola.
♦ Iinjini zedizili zonke zizinto ezisemgangathweni ezisemakhaya okanye ezingeniswe elizweni, ezineempawu zokuziphatha okuhle ukuqala, amandla anamandla okulayisha ngaphezulu, ulwakhiwo oluqinileyo, olulungele ukugcinwa, olulula ukuyisebenzisa, kwaye luzenzekelayo.
Gcwalisa ubunakho bendlu ngaphakathi
Ukuqhutywa koomatshini bokuvavanya izixhobo nezixhobo ezinikezelwe ngumthengi kuyo yonke imigangatho yeNFPA
Iimodeli ezithe tyaba zomthamo ukuya kwi-2,500 gpm
Iimodeli ezithe nkqo zamandla ukuya kwi-5,000 gpm
Iimodeli ezisemgceni zamandla ukuya kwi-1,500 gpm
Iimodeli zokutsala zokuphela komthamo ukuya kwi-1,500 gpm
Iimoto: Injini yombane okanye injini yedizili
Iiyunithi ezisisiseko kunye neenkqubo ezihlanganisiweyo.
Iimpompo zomlilo zoMbane zombane kunye neeDiesel Drayivu zinokubonelelwa ngayo nayiphi indibaniselwano yeempompo, iidrives, ulawulo kunye nezixhobo zokudwelisa nezamkelweyo kunye nezicelo zenkonzo yomlilo ezingafakwanga kuluhlu. Iipakethe ezipakiweyo kunye neenkqubo zokufaka iindleko zempompo esezantsi kunye nokubonelela ngezi
Ukuhlangabezana neengcebiso zemigangatho yoMbutho woKhuselo loMlilo weSizwe njengoko upapashiwe kwiphetshana lawo lama-20, ushicilelo lwangoku, izixhobo ezithile ziyafuneka kulo lonke ufakelo lwempompo yomlilo. Ziya kwahluka, nangona kunjalo, ukuze zilungele iimfuno zofakelo lomntu ngamnye kunye neemfuno zabasemagunyeni bomshuwalense wendawo. Impompo yeTongke ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zempompo yomlilo ebandakanya: i-valve yokunceda, i-valve yokukhupha umoya ngokuzenzekelayo, imitha yokuhamba, kunye nevalve yokuthintela ibhola. Nokuba zithini na iimfuno, iSterling inelayini epheleleyo yezixhobo ezikhoyo kwaye inokwanelisa iimfuno zofakelo ngalunye.
Iitshathi eziveliswe apha ngezantsi zibonisa ngokucacileyo izixhobo ezininzi kunye nokuqhuba ngokuzikhethela okufumanekayo nazo zonke iimpompo zomlilo zaseThongke kunye neenkqubo ezihlanganisiweyo.
Egqithileyo I-API610 ANSI yeNkqubo yeMichiza esemgangathweni yePethemhemical Heavy Crude Fuel yokuGqithisela i-Pump
Okulandelayo: I-LDP Series I-single-Stage End-Suction Horizontal Centrifugal Water Pumps
Umthamo 20-1400 m3/ h
Uxinzelelo lokusebenza ukuya kuthi ga kwi-2.0Mpa
Ulwelo amanzi acocekileyo okanye ulwelo lomzimba kunye nolwemichiza Amanzi angathathi hlangothi, PH = 6.5-8.5, umxholo we-chloride ion = 400mg / l, ubushushu obuphakathi obungaphantsi kwama-40
Isantya sempompo I-1000-3600 RPM
Injini Cummins, Deutz, Perkin okanye olunye uphawu lwase China
Bowl: Sakaza intsimbi, Stainless intsimbi
Shaft: intsimbi engenanto
Impeller: Cast yentsimbi, Ibronzi okanye Stainless intsimbi
Ukukhutshwa kwentloko: Isinyithi okanye isinyithi sekhabhoni
Isetyenziselwa ukubonelelwa ngamanzi emlilweni kwi-petrochemical, igesi yendalo, isityalo samandla, i-cotton textile, i-wharf, i-aviation, indawo yokugcina impahla, isakhiwo esiphakamileyo kunye namanye amashishini. Inokusebenza nakwinqanawa, itanki yolwandle, inqanawa yomlilo kunye nezinye iimeko zonikezelo.
Ukuphela kwesigaba sokutsala uhlobo lwe-centrifugal NFPA ...